Ny Tsenam-barotry Ny Fifandraisan-davitra: Novain'ny Fitambaran'ny SFR-Numericable?	Voadika ny 12 Jolay 2014 18:43 GMT
Zarao: Fijerena ireo làlana marosampana amin'ny alalan'ny ampahan'ny Aterineto – avy amin'ny Tetikasa Opte CC BY 2.5
Ho afaka averina atsofoka ao anatin'ny fanavaozana tahaka ny fampiasàna vola ao amin'ny Cloud, ireo tahiry ho azo avy amin'ilay fanovàn-drafitra araka ny fanadihadian'i Lionnel Piar, filoha lefitry ny Fifandraisan-davitra ao amin'ny CGI Consulting.
Ara-indostria, ny zavatra mahaliana ao anatin'io fifanatonana io dia ny hoe, amin'ny andaniny isika dia manana ny SFR izay misahana indrindra ny tolotra momba ny finday, ary amin'ny ankilany kosa dia manana ny Numericable izay misahana ny “câble”. Miaraka amin'io fifanatonana io, tafiditra kokoa anatin'ny fomba fiteny “mpandraharaha ankapobeny” isika, izay afaka manolotra ny fitambaran'ireo tolotra ireo ho anà orinasa iray. hoy ihany io manam-pahaizana io.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraMathieu Carrere
Mediam-bahoakaTeknolojiaToekarena sy Fandraharahàna